एनआरएनए युकेको अध्यक्षमा फगामी निर्वाचित
अल्डरसट । एनआरएनए युकेको अध्यक्षमा योगकुमार फगामी निर्वाचित भएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेको गत शनिबार सम्पन्न सातौं महाधिवेशनबाट उनी निर्वाचित भएका हुन् । उनी एक हजार २ सय ९८ मत ल्याई विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रत्याशी कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाले ९ सय १२ मत ल्याएका थिए ।
११ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेको उपाध्यक्ष पदमा पुनम गुरुङ, शेरबहादुर सुनार, डा. प्रेमबहादुर आले, सुशीला राई, ललितकुमार न्यौपाने र प्रेम गाहा मगर निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा राजकुमार त्रिपाठी, उपमहासचिवमा विनय अधिकारी, सचिवमा तारानाथ भण्डारी, नारायण गाउँले र सुरज मास्के, कोषाध्यक्षमा सचिन श्रेष्ठ, सहकोेषाध्यक्षमा गजेन्द्र गुरुङ, युवा संयोजकमा लालबहादुर गुरुङ र कुमार थापा निर्वाचित भएका छन् भने महिला संयोजकमा लीलादेवी निर्विरोध चयन भएकी छिन् । र, १५ जनाले उम्मेदवारी दिएको सदस्य पदमा अर्कराज तिम्सिना, गंगाबहादुर राना, बिमला लिम्बू, डेविन्द्र थापा, मुकेश राना, पवन राई, पवन शर्मा, होमनाथ पौडेल र जीतबहादुर रानाभाट निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, आईसीसी सदस्यमा शान्ति थापा, जयप्रकाश गुरुङ र कुमारी गुरुङ निर्वाचित भएका छन् ।
अध्यक्षलगायत निर्वाचित सबै पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई अध्यक्ष मण्डलले गत आइतबार एम्पायर हलमा प्रमाणपत्रसहित खादा लगाई सम्मान गरिएको थियो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष फगामीले निर्वाचन समिति र मतदाताहरुलाई धन्यवाद दिँदै आपूmलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताएका छन् ।
नवनिर्वाचित योगकुमार फगामीले आप्mनो प्रतिबद्धतामा काठमाडौंमा निर्माण भइरहेको एनआरएनए भवन तथा शंखमुल पार्क बनाउनमा आवश्यक पहल गर्ने, एनआरएन युकेलाई सबै नेपाली संघसंस्थाहरुको साझा संस्था बनाउने, युवाहरुको संगठन विस्तार गर्ने, क्षेत्रीय समन्वय परिषद गठन गर्ने, नेपाल हाउस परियोजनालाई निरन्तरता दिने, कम्तीमा पनि दस हजार पंजीकृत सदस्य बनाउन पहल गर्ने, समयसांपेक्ष अनलाईन सदस्य तथा प्रत्यक्ष भोटिङमा पहल गर्ने, अक्षयकोष स्थापना गर्ने, नेपाली दूतावाससँग सहकार्य गर्ने र बेलायतमा रहेका भूपू गोर्खाका अग्रज तथा वृद्धहरुको दैनिक जीवनमा आईपर्ने समस्याहरुलाई समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने जनाइसकेका छन् । तर, उनले आफ्नो कार्यकालमा गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि के कति काम गर्न सक्छन् समयले बताउनेछ । पाँचौं कार्यसमितिको महासचिव र छैटौं कार्यसमितिको उपाध्यक्षको समेत अनुभव लिइसकेका फगामीले आप्mनो कार्यकाल सम्पन्न गर्नका लागि सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
बेलायतका विभिन्न मतदान केन्द्र्रमा दुई हजार ८ सय ८२ मत खसेको र हुलाकमार्फत् २३ मत प्राप्त भई कूल दुई हजार ९ सय ५ मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको थियो ।
३ जना अध्यक्षको प्रत्याशीसहित ६ जना उपाध्यक्षका लागि ११ जना, १ जना महासचिवका लागि ३ जना, १ उप–महासचिवका लागि २ जना र ३ जना सचिवका लागि ४ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । ३ जना आईसीसी सदस्यका लागि ५ जना, १ जना कोषाध्यक्षका लागि ३ जना, १ जना सहकोषाध्यक्षका लागि २ जना, २ जना युवा संयोजकका लागि ४ जना र ९ जना सदस्यका लागि १५ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो भने १ जना महिला संयोजकमा भने १ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो ।
मतदाताहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै लेस्टर, साउथ ईस्ट प्लमस्टिड, ह्यारो र अल्डरसटमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको थियो । शनिबार बिहान ८ बजेबाट बेलुकी ८ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको थियो । मतदानपश्चात् मतदानमा खटिएका निर्वाचन आयुक्त र अधिकृतहरुले विभिन्न स्थानबाट महाधिवेशन स्थल अल्डरसटमा मतपेटीका ल्याई मध्यरातबाट मतगणना सुरु गरी आइतबार बिहान निर्वाचन समितिले परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो ।
बेलायतका विभिन्न स्थानमा मतदान गरिएकोले पनि अल्डरसटस्थित एम्पायर हलमा आयोजना गरिएको सातौं महाधिवेशनको औपचारिक कार्यक्रममा भने त्यति धेरैजनाको उपस्थिति हुन सकेन । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको महाधिवेशनमा एनआरएनए युरोप संयोजक कुल आचार्यलगायत आईसीसी सदस्य, सल्लाहकार र विभिन्न व्यक्तिहरुले शुभकामना मन्तब्य प्रकट गरेका थिए ।
पहिलो चरणको औपचारिक कार्यक्रमको समापन सँगसँगै डा. चन्द्रबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा अध्यक्षमण्डल गठन गरिएको थियो । अध्यक्ष मण्डलमा कृष्णप्रसाद अधिकारी, विजय थापा, सिरी लिम्बू र विनोद ज्ञवाली थिए । अध्यक्ष मण्डलसमक्ष महासचिव विजयबिक्रम लिङ्देनले कार्यसमितिको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन र विधान संशोधन संयोजक एकेन्द्र गुरुङले विधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्तुत् गरेका थिए । उनीहरुले प्रस्तुत् गरेको प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफल भई सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।
निर्वाचनलाई व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि छैटौं कार्यसमितिले डा. चन्द्र लक्सम्बाको अध्यक्षतामा रामशरण सिम्खडा सदस्य सचिव, दुत पुन, बिजन भट्ट, पूर्ण लम्सम, सुमाया राई र कृष्ण गुरुङ सदस्य रहेको निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै, एनआरएनए युकेको विधानलाई समयअनुसार परिमार्जित गर्नका लागि एकेन्द्र गुरुङको संयोजकत्वमा चिरञ्जीवी ढकाल, विश्वासदीप तिगेला, कृष्ण भट्ट र नारायण कँडेल रहेको विधान संशोधन समिति गठन गरिएको थियो ।